အပေါ်မယ့်အရာကိုရိုက္ကူးႏိုင္ပါဂိုဏ်း? ဒါဟာအဖွဲ့ကဒီမှာရှိကြညမ်းဂိမ်းများနှင့်ကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့နိုင်ဖြစ်တင်ပြဖို့တစ်ကြယ်ခင်းကျင်းညမ်းဂိမ္းကောင်းမြတ်ခြင်းကသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျ။ ဒါကတစ်ဦးသီးသန့်ပလက်ဖောင်း၏အကြိုက်သောသင်ရှိသည်နိုင်မှသာမက်မက်များအတွက်လွန်းမဝေးအတိတ်! ကျွန်တော်တို့သုံးစွဲမယ့်အချိန်အကြာကြီးအတူတကွချပြီးဤပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မည်သည့်အကြောဂိမ်းကစားနှင့်အတူမေတ္တာ XXX လှန်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ဖို့တတ်နိုင်သည်မိမိတို့အဘို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကို၏ထိပ်ဆုံးမှာလှေမှကြွလာသောအခါအလွန်ကြီးစွာသော၊အပြန်အလှန်လိင်ခေါင်းစဉ်။, အတူကြွယ်ဝသမိုင်းနှင့်အကြီးပိုပြီးကျန်အတွက်အကြံပေးအဖွဲ့၊မယ်ဆိုတာကိုပြသသင်လိုအပ်သမျှရှင်သန်ရန်အတွက်ဒီဂိမ်းတစ်ခုငရဲ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာတွင်အ punters အလွန်ပျော်ရွှင်အမှန်ပင်။ ကျနော်တို့အရှည်ဖြစ်ဖို့နံပါတ်တစ်အနှုန်းများအတွက်ဦးတည် XXX၊ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မပေါ်လာမှာကြိုးစားထွက်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်ကိုယ်အဘို့? ကျွန်တော်တို့တွေဟာတော်တော်လေးကိုယုံကြည်ကြောင်းချစ်ကြတာပေါ့အဘယျသို့ဖြတ်ပြီးလာနှင့်သင်ဟုတ်ကဲ့–ကျွှန်တော်အကြင်ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးအပြာဂိမ္းစည်းအဝေး၏အသက်တာ။, ဖတ်အောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပိုပြီးအရည်ရွှမ်းအပေါ်အသေးစိတ်အမွတ္သားျခင္း၌ရှိကြ၏ညမ်းဂိမ္း:ငါဖို့သေချာပါလိမ့်မယ်ဖြည့်စွက်အတွက်အဖြစ်လျင်မြန်စွာအဖြစ်!
တဦးတည်း၏အရေးအပါဆုံးအမှုအရာနှင့်ပတ်သက်သောအမြင်ရှိကြ၏ညမ်းဂိမ်းအကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မယုံနိုင်လောက်အောင်လျောက်ပတ်သောဂိမ်းနှင့်အားလုံးသိလည်းကောင်းစွာဖြစ်ဆိုလိုတယ်ဆိုတာဖန္တီးျခင္းအချို့၏အပူဆုံးဂိမ်းအတွက်ဒီနေရာ။ တာရဲယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူကြောင့်နေအရသွား၊ကျွန်တော်ဘာကိုသိလိုအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဂိမ်းများအကောင်းဆုံး။ တစ်ရိုးရှင်းသောဖြေရှင်းချက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်–ပြောပြခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အောင်ဂိမ်းလူတကယ်တော့ကစားဖို့ဘဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းပါ၊ပြီးတော့ထည့်တွက်ပြီးနောက်!, အဆုံးသတ်ရလဒ်ရိုးရှင်းပါတယ်၊ဒါပေမယ့်တောက်ပဒေတာဘေ့စ၏ဂိမ်းနှစ်ခုလုံးပျော်စရာဖြစ်ကြောင်းအားကစားနှင့်ၡမ်ားအဖြစ်မင်း။ ကျွန်တော်ပေးဖူးပါတယ်ကိုအများကြီးတစ်ငရဲ၏အနုပညာလိုင်စင်နှင့်လွတ်လပ်ခွင့်မှကြွလာသောအခါသို့ပြုသူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းလည်း–ကၽြန္မရေးအတွက်ဖို့သူတို့ကိုအနိုင်အရိုက်ချက်ရရန်ကုန်ပစ္စည်းများသူတို့လိုအပ်။ ဒါကြောင့်နဲ့တူခံစားရလျှင်ဖြစ်ခြင်း၏ထိပ်တွင်နှင့်အတူကမ္ဘာအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဂိမ္း၊ပတ်ပတ်လည်ရှိကြညမ်းသွားနိုင်စေဖို့သင်ပေးနှင့်အတူအတိအကျအဘယ်အရာကိုသင်တဏှာသည်။, အဘယ်သူမျှမအမှားလုပ်ပါအကြောင်း:ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်မှာယူနိုင်ရန်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သက်သေပြတဲ့ငရဲ၏ပိုက်ဆံအများကြီးဖြစ်ဖို့အလုပ်ကနေ XXX။
တစ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကဏ္ဍကစားလိင်ဂိမ်းများသောလူအဆက်မပြတ်နားလည်ပြီးဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဂရပ်ဖစ်ကြသည်အရာကိုကျော်လွန်နီးပါးသည်အခြားအရွယ်ရောက်ပြီးခေါင်းစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒီမယွင်းသို့မဟုတ်ကျပန်း oddity:ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တယ်မြေပြင်ကနေတက်ကြည့်ဖို့အဖြစ်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်လူတို့သိသောအရာကိုသူတို့ရတဲ့အနေအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံ။ ဂိမ်းကစားဒီမှာလည်းအချစ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမခွဲခြားဘဲဘယ်စနစ်ကသူတို့အပေါ်၊သူတို့နေဆဲအနာရှိကြညမ်း။, ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာသပ္ပါယ်အရည်အသွေးကိုနည်းပညာအခြေခံအားဖြင့်သေချာသောမည်သည့်စက်ကိရိယာအနိုင်ကစားရန်အကြောင်းရှိသည်။ ဆိုလိုပါတယ်ရှိမရှိအပေါ်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံး GPU သို့မဟုတ်တစ်ခုခုပိုပြီးဖွင့်သလိုမျိုးတစ်အာလူး၊ရှိကြညမ်းသွားနိုင်စေဖို့တင်ဆက်သင်အလွန်ကြီးစွာသောအတွေ့အကြုံအားလုံးအတူတူပါပဲ။ ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသည်ငါတို့အဘို့အ၊ကျနော်တို့နိုင်ချင်မှရောက်ဖြစ်အများအပြားဂိမ်းကစားကိုအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ဤသည်ကိုလည်းကြီးမြတ်များအတွက်သူမည်သူမဆိုကယ့်ကိုခံစားရရန်လိုအပ်ပယ်တွင်လူရှုပ်ဖို့မှန်မှန်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်–သင့်စက်မည်မဟုတ်ပတ္ကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကို!, တကယ်တော့၊သာရာရသွားပူသည်၊အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤဂိမ်းငှေ့မြားသောအဖြစ်မင်းနှင့်သင်ချည်နှောင်မြှင့်သောခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နှင့်အတူအားလုံးအ jerking သင်ကလုပ်နေပါလိမ့်မယ်။
ကြည့်:ငါသဘာဝကျကျသင်ပြောပြသွားသောအဘယျသို့ရှိကြညမ်းဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ဖို့ရှိပါတယ်သည်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒီပလက်ဖောင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုပေးရဖို့သင်ဖို့အကောင်းဆုံးင်၊ကိုယ့်ကိုတက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်င့်အဘယျသို့ပေါ်မှာသွားကြသည်။ ကျွန်တော်ဆွဲမျှမလာကြပြီးအမှန်တကယ်လိုကယ်နှုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံဖြစ်နိုင်၊ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်မဖမ်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ဦးအချပ်၏အရည်ရွှမ်း XXX အရေးယူနှင့်အရင်ကြည့်ညိွေနှင့်အတူသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒ?, လာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်လမ်းတစ်လျှောက်–ခုသို့အရအဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ဧရိယာနဲ့သဘောပေါက်ရှိကြညမ်းဂိမ်းများကယ့်ကိုပတ်ပတ်လည်နှင့်ပတ်သက်သည်မှကြွလာသောအခါဂိမ်းဖန်တီး။ စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပျော်ရွှင် jerking!